हाम्राे पिपलबाेट » २०७५ सालमा तपाइले कति कमाउने योग छ ? (हेरौं २०७५ सालको बार्षिक आर्थिक राशिफल) २०७५ सालमा तपाइले कति कमाउने योग छ ? (हेरौं २०७५ सालको बार्षिक आर्थिक राशिफल) – हाम्राे पिपलबाेट
२०७५ सालमा तपाइले कति कमाउने योग छ ? (हेरौं २०७५ सालको बार्षिक आर्थिक राशिफल)
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, य )
बृश्चिक राशिका मानिसहरुले २०७४ सालमा सेयर बजारबाट मनग्य आम्दानी गर्ने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले यो वर्ष लाभदायक र आशावादी परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना छ । बैसाख, मङ्सिर र फाल्गुन महिनामा सुन किने फाइदाजनक होला । लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन केही ढिलो हुन भने सक्ने देखिएको छ । फलामको व्यापार गर्दा राम्रो होला । अनावश्यक खर्च हुने योग छ ।